Flowers နှင့် ပတ်သတ်သောရှာဖွေမှုရလဒ်ZEKKEI Japan(2/22)
Japan has flowers that bloom throughout all four seasons. So we have collectedavariety of spots where you can enjoy flowers like cherry blossoms, rapa flowers, wisteria, tulips, cosmos, irises, narcissuses, moss phlox, and azaleas as well as highland plants. Be sure to come and see these spectacular flower gardens when you visit Japan.
လာဗန်ဒါပန်းများဖြင့် နာမည်ကြီးသော ခီတဟိုကိုင်းဒိုးနာကတိုမိယောနောမချိတွင် ရှိသည့် (ဖုအမုတိုမိတ)။ ကြီးမားကျယ်ပြန့် သော လာဗန်ဒါပန်းခင်းကြီးမ...
ကမ္ဘာအမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ဒေသဖြစ်သော အထူးသမိုင်းအမွေအနှစ်များရှိသောဘုရားကျောင်း အနီးအနားဖြစ်ပြီး ၁.၄ စတုရန်းမှတာရှိသော လယ်ကွင်းတွင် ဟိုတဲအိအိ...